लकडाउनको हल्लाले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले एकाएक यस्ताे गर्न थालेपछि… – Media News Khabar
लकडाउनको हल्लाले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले एकाएक यस्ताे गर्न थालेपछि…
साउन ३० काठमाडौं l शेयर बजारमा सबैकाे आकर्षण बढ्दाे छ । गत महिना असार ३१ गते बिहीबारका दिन सेयर बजार मापक नेप्से सूचक २८८३ बिन्दुमा थियो। त्यसपछिको १९ कारोबार दिनमै सेयर बजार करिब ३०० अंकले बढिसकेको छ।
यसमध्ये पनि ५ दिन सेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। ५ दिन १/२ अंक वा १ अंकभन्दा पनि कमको मात्रै वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा १९ दिन कारोबार भएपनि सेयर बजारमा ठूलो ठूलो वृद्धि भने ९ दिन मात्रै भएको छ। त्यसमा पनि एक दिन ९७ अंक, दुई दिन ५० देखि ५५ अं‌क गरेर ३ दिनमै दुई अंक बढेको थियो। बाँकी दिन १०/२० अंकको वृद्धि भएको देखिन्छ।
यो साताको अन्तिम दिन नेप्से सूचक १६ अंकले बढेसँगै बजारले ३१७८ बिन्दु ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको छ। गत महिनाको अन्तिम कारोबार दिन ४० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको सेयर बजारको कूल पुँजीकरण नै अहिले साढे ४४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
पछिल्लो समय जसरी बजार बढिरहेको छ त्यसलाई लगानीकर्ताहरु नै अस्वभाविक भन्न थालिसकेका छन्। त्यसमाथि जुन समूहले बजारलई उचालिरहेको छ, त्यो स्वभाविक नरहेको उनीहरुको बुझाइ छ। पछिल्लो वृद्धिमा जलविद्युतको योगदान उच्च छ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार जलविद्युत समूह बढ्नु पर्ने भन्दा धेरै बढिसकेको बताउँछन्। नयाँ सरकार बनेपछि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउने चर्चा भएसँगै जलविद्युत समूह बढ्न सुरु भएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ। नभन्दै सरकारले सोमबार घिसिङलाई नियुक्त गरेर बुधबारबाट काममा खटाइसकेको छ।
यो आम मनोविज्ञान हो। कुलमान घिसिङ आउँदा प्रसारणलाइन छिटो बन्छन्, निर्माणाधिन आयोजनाले छिटो बिजुली बेच्न पाउँछन् र अहिलेको घटेको बैंक ब्याजदरको फाइदा विद्युत आयोजनाले पनि लिन पाउँछन् भन्ने मनोविज्ञानले यो समूह बढेको रौनियारको टिप्पणी छ। त्यस्तै नेटवर्थ सकारात्मक भएका कम्पनीलाई बैंक ऋण तिर्ने उदेश्यले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने निर्णयले पनि यो समूह बढेको हो। तर, समग्र बजारलाई जलविद्युतले मात्र होइन बाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी र लघुवित्तहरुले पनि डोहोर्याइरहेका छन्। जबकी बजारमा तरलता अभाव चुलिएको छ, ब्याज दर बढाउनु पर्ने दबाबमा बैंकहरु पुगेको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
‘बजार बढ्नुको अर्को कारण संभावित लकडाउनको हल्ला नै हो’ एक ब्रोकर भन्छन्, ‘संक्रमण दर बढिरहेको छ। अस्पतालहरु भरिभराउ हुन थालिसकेका छन्। यस्तोमा लकडाउन हुन्छ र सबै क्षेत्र बन्द भएपनि सेयर बजार खुला हुन्छ।’
सेयर बजार खुला भएपछि यसअघिको जस्तै पुँजी बजारमा सबैतिरको पैसा भित्रिएर सूचक अझ माथि जाने विश्लेषण साधारणदेखि विज्ञसम्मले गरिरहेका छन्। ‘हुन पनि हो, मान्छेले सबैथोक बन्द भएपछि जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ त्यहाँ लगाउँछ’ ती ब्रोकरको विश्लेषण छ, ‘त्यही भएर अहिले लगानी गर्दा ठीक समय हुन्छ भनेर धेरैतिरबाट पैसा आउन थालेको छ।’ नभन्दै पछिल्लो समय कारोबार रकमसमेत बढ्न थालेको छ।
अहिले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरु फेरि फर्किएका छन्। विगतको नाफामा सेयर बजारबाट भएको लगानीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले लगानीमा थोरै कडाइ गरेपनि अहिले लगानी गर्दा भोलिका दिनमा रिटर्न लिन सकिन्छ भनेर बैंकहरुले पनि पैसा लगाउन थालेको ब्रोकरहरुको भनाइ छ।
‘असारको नाफा बुक गरिसकेका छन्। सामूहिक लगानी कोषसँग पनि नाफा बुक गरेपछि फेरि बजार प्रवेश गर्नु पर्ने भएको छ। त्यसैले सानासाना कोठे फण्डदेखि ठूला ठूला कम्पनी सबै सेयर बजारमा सक्रिय हुन थालेका छन्’ ती ब्रोकरले भने।
राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितलाई भनेर आवधिमा १० र चालु पुँजीमा २० प्रतिशत बढि ऋण लिन पाउने ब्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ। यस्तो ऋण तिर्ने समय एक बर्ष बढेको छ।
यस्तो पैसा २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। त्यो पैसा फेरि सेयर बजारमा चलायमान भएकाले पनि बजार सूचक उकालो लाग्न थालेको ब्रोकरहरुको बुझाइ छ। बिजमाण्डुमा लेखिएकाे छ ।
Previous आजबाट फेरी अर्काे आईपीओ खुल्यो, आवेदन आज दिँदा ठिक कि केही दिनपछि ?
Next अहिले यी पुरानो नोटको भाउ लाख भन्दा पनि बढी छ ! यि नोट तुरुन्तै बेची लखपती बन्नुहोस ! कहाँ कसरी बेच्ने तरिका सहित हेर्नुहोस